Maxkamad furriinka lammaanaha ku xiraysa inay galaan imtixaan. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Maxkamad furriinka lammaanaha ku xiraysa inay galaan imtixaan.
Posted by: radio himilo September 27, 2017
Muqdisho – Furriintu ma ahan wax fudud, hayeeshe wuxuu kasii adag yahay Maxkamadda Yibin People’s Court oo ku taalla gobalka Sichuan, halkaas oo hal garsoore uu dhawaan dhaqan-geliyay imtixaan furriin oo labada lammaane ay qasab tahay inay ku dhacaan si codsiga furriinkooda uu ku ansaxo.
Previous: Muslimiinta Rohingya – Gaajada iyo Hoy la’aanta waxaa usii dheer Kufsi ba’an.
Next: Liverpool oo mar kale barbaro ka heshay Tartanka Champions League.